Izindaba - Amaslippers Abesifazane E-Fluffy Mink Fur
Iziliphu ze-Fluffy Mink Fur zabesifazane
Amaslayidi e-Fluffy Mink Fur Slides: I-faux mink fur yabesifazane Isilayidi Esine-Elastic Strap sihlanganisa isilipha esithokomele kanye nezimbadada ezisebenzayo zibe yinto eyodwa.Lawa ma-slippers esitatimende azoba intandokazi yakho entsha.
I-MEMORY FOAM INSOLE: Isiliphu ngasinye sifakwe i-insole ene-multi-density cushioned futhi ifakwe igwebu lenkumbulo ukuze ube nomuzwa ofana nefu ezinyaweni zakho.Ukunakekelwa okulula kokusha okuhlala isikhathi eside - vele uziphonse emshinini wakho wokuwasha!
【Ama-Cute Women's Slippers】Amaslippers endlu Yabesifazane Athokomele anomklamo wezinzwane ezivulekile enza izinyawo ziphefumule ngaphandle kokujuluka entwasahlobo noma ehlobo.Ibhande lokunwebeka elingemuva lamaslipper angaphakathi libamba izinyawo zakho endaweni evikelekile futhi lisekela iqakala nonyawo ekusheleleni.
【I-Thick Memory Foam Cushion】Iziliphu zabesifazane ezizinzwaneni ezivulekile zenziwa ngegwebu lenkumbulo elinwebeka kakhulu elizonikeza ukwesekwa okwanele ukunciphisa ukucindezelwa kwezinyawo.Amaslippers e-foam memory foam wesifazane akwenza uzizwe sengathi uhamba phezu kwamafu uma ushelela kulawa maslipper, ukuthinta okubushelelezi futhi uphumule ezinyaweni.
【I-Non-Slip Rubber Sole】Amaslippers egwebu lenkumbulo yabesifazane ozwane oluvulekile anokumelana okuhle nokungasheleli kanye nokuguquguquka kwe-TPR outsole, angakuvimbela ekusheleleni lapho uhamba endaweni emanzi.Kuyisinqumo esihle ukugqoka nxazonke zendlu, phansi ezitebhisini ezingaphansi kanye nohambo olufushane olungaphandle.
【I-Multi Function】Amaslipper ethu afanele igumbi lokulala, igumbi lokuhlala noma ikhishi, kodwa futhi alungele ngaphandle kwendlu.Ungaphuza itiye lantambama egcekeni, uchelela utshani, uhambe uye ebhokisini leposi, noma uphume uyosayina amaphasela.
【Izinketho Ezinhle Zezipho】Amaslipper ethu amahle atholakala ngemibala eyahlukene.Lawa ma-slippers asekhaya abesifazane abangasindi bayizipho ezinhle zentombi, unkosikazi, umama, indodakazi kanye nabathandekayo bakho.
AKUKHO IKUDUDUZA OKUTHUTHUKILE: Lawa maslippers amahle adonsayo anoboya be-faux-faux obuphezulu kanye nombhede woboya be-faux ofanayo.Futhi banokuphefumula kokugcina ngokunethezeka nesitayela.
Isikhathi sokuthumela: Apr-09-2022